Barcelona oo heshiis lagaartay Cayaaryahan Record Cusub ka dhigay Koobka aduunka? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Barcelona oo heshiis lagaartay Cayaaryahan Record Cusub ka dhigay Koobka aduunka?
(08-08-2018) Kooxda Kubada Cagta Barcelona ayaa heshiis rasmi ah lagaartay Cayaaryaahnka dalka Senegal ee lagu Magacaabo Moussa Wague heshiiskaas oo ku kacaya lacag dhan £4.5million.
Moussa Wague oo u Cayaari doona Barcelona B ayaa Saxiixay heshiis Cusub oo shan sano ah kaas oo uu ugu dheeli doono kooxda dalka Spain waxaana ay ka soo qaateen kooxda dalka Belgiam-ka ee KAS Eupen.Naadigaas oo soo bar baarsatay isaga oo aad u yar.
Cayaaryahanka dalka Senegal ee Moussa Wague ayaa dhawaan dhigay Record Cusub oo koobka aduunka ah kadib markii uu Noqdey Cayaaryahankii ugu da.da yaraa ee Afrikaan ah ee Gool dhaliya koobka aduunka 2018 waxaana uu yahay Xiddig aad ugu Wanaagsan dhanka Weerarka.
Naadiga ka dhisan Gobolka Catalana ayaa Cadeeyey in heshiiska shanta sano ah ee uu Saxiixay Xiddiga Moussa Wague in lagu kansali karo oo kaliya aduun lacageed gaaraya £90m Waxaana Cayaaryahankaan hada da.diisu tahay 19 Sano.